Norway Kooxda Jwxo shiil Uga Hawlgasha Oslo oo Arimo Qalafsan ku Qadhaabta – Rasaasa News
Jun 24, 2010 Norway Kooxda Jwxo shiil Uga Hawlgasha Oslo oo Arimo Qalafsan ku Qadhaabta
Baaritaan dheer oo la sameeyey ka dib, ayaa waxaa la ogaaday sababaha keenay in dalka Norway uu noqday wadanka qarashka ugu badan ka soo galo jwxo-shiil. Wadanka Norway waxaa jooga dad yar laguma badna, sida wadamada kale, balse marka ay timaado dhinaca maal gelinta Jwxo-shiil, waa wadanka koowaad. Hadaba waxaan helay xaqiiqda jirta ee sababtay in wax sidaas u dhacaan waana sidan;
1. Kooxda aan indha lahayn ee u joogta Jwxo-shiil ayaa si aan munaasab ahayn ku raadiya shilin iyaga oo dariiqyada daasado la wareega. Waxaa kale oo ay hada bilaabeen in ay dumarka u hanjabaan waxay isticmaalaan erayga ah hadaad bixin waydo lacagta Ogaadeen ma tihid waa wax lala yaabo Ogaadeenimada dadkuna runtii aad bay ugu wareereen.
2. Kooxdan ayaa waxay adeegsadaan dadka nolasha ka dhacay ee naftooda maaro u waayey marka aad fiiriso dadka u,adeega Oslo waa dadkii calancasta ahaa. Dhamaantood waa dadkii ku wereeray wadanka Swedan Maxamed Sahal Mursal Shiil, waxayna ahaayeen reer Norway iyaka ayaa is sheegay in ay iyagu dileen kuligoodna way ku faanaan marka ay joogaan wadanka Norway.
Kooxdan oo mindiyo ku weeraray dhawr jeer odayaal ku nool dalka Norway, kooxdan oo aan indho iyo dhagotoona lahayn ayuu Jwxo shiil telefoon ku hagaa. Waxaana horbooda ninka uu adeerka u yahay Jwxo-shiil ee la yiraahdo Maxamed Dheeg iyo xoogsade, Iltol . Dheega ayaa si toos ah oo aan gabasho lahayn isagu ugu dira dadk ruuxii aan lacag siina waxay ku dhahaan waa Dabaqoodhi.
Dadkani ma, aha dad horay ugu soo shaqayn jiray jwxo-shiil ee waa dad cusub oo isaga hoos taga dadkana uu yiri laaya wixii iga horyimaada.
Qaadkooda waxay ka qaataan xawaaladaha oo loo soo dhigo qaaraanka dadka laga qaado.
waxaa kale oo la sheegayaa in ay xawaalado si toos ah umaal geliya jwxo-shiil ay ka jiraan dalka Norway taasna baadhitaan ayaan ku haynaa kuwa ay yihiin iyo dadka wakiilada ka ah waana soo gudbin doonaa haddii Eebbe idmo.